Ladlọ Ebube derslọ - China Ladders Manufacturers & Suppliers
Ngwongwo ihe nchara nchara nke uzo ozo site na SSL03
SSL03 bụ stool dị mkpa maka ụlọ. Emeghere size bụ 570 * 465 * 845mm, na apịaji size bụ 465 * 80 * 935mm. Ọ naghị ewe ọtụtụ ohere mgbe ọ na-echekwa ya. Nzọụkwụ a dị oke mkpa. Mgbe ihe ndị ahụ dị oke elu iji ruo ọbụna ma ọ bụrụ na ị kwụ na mkpịsị ụkwụ gị, ị nwere ike idozi nsogbu a n'ụzọ dị mfe site na ịbanye na ha. Ọnọdụ a na-adịkarị n'ime ezinụlọ, yabụ na ọ gaghị enwe ike ịnagide gị.
Steprịgo Nzọụkwụ Ubu CSA ANSI Kwadoro Multi Nzube 5 Nzọụkwụ Single Side Faiba glaasi Ladder
PFGH105 bụ 7 ft faiba glaasi n'elu ikpo okwu nke nwere 5 nzọụkwụ, elu oghere bụ 2020mm, mmechi elu bụ 2180mm, dịrị 13.3kg, gosiri ibu bụ 300 pound (136kg), ibu ọnụego bụ IA larịị. Nnukwu ikpo okwu ya dị obosara ma ghara ịdị na-amị amị, na-enye ebe nchekwa na nchekwa ọrụ maka ndị ọrụ.
Yellow na-acha uhie uhie faiba glaasi ejima nzọụkwụ n'ọkwá FGD105HA
FGD105HA nke Abctools mepụtara bụ fiberglass ejima steepụ nke enwere ike iji gburugburu ọkụ eletrik. Ọ dị sentimita 6 n’ogologo ma nwee nzọụkwụ 5, oghe mepere emepe bụ 1730mm, ogo ya mechiri emechi bụ 1850mm, ibu ya dịkwa kilogram 12.8. Enwere ike iji ubube a mee ihe na akụkụ abụọ, nke na-adị nchebe ma kwụsie ike karịa ubube otu aka. E nwere ike iji obosara sara mbara dị n'elu tinye nnukwu ngwaọrụ na bọket, nke dị mfe ịrụ ọrụ;
FGHP103S 300lbs ibu ikike faiba glaasi n'elu ikpo okwu nzọụkwụ n'ọkwá
FGHP103S nke Abctools mepụtara bụ ọkwa dị elu. Ọ nwere 3 nzọụkwụ. Oghere mepere emepe bụ 1740mm, nke mechiri emechi bụ 1880mm, na ibu bụ 10.9kg. Ibu ibu bụ ụdị IA, ikike ibu bụ 300lbs. Eku bụ nke na-abụghị conductive faiba glaasi. Ya mere, ọ dabara adaba maka iji ọkụ eletrik. Nnukwu ikpo okwu na-adị ka ị na-eguzo na ala, ebe ọrụ 4X na-enye gị ohere ịrụ ọrụ n'akụkụ ọ bụla.
6 ft ụdị IA 300 lbs ibu ikike foldable triangle faiba glaasi nzọụkwụ n'ọkwá
The FGH105 faiba glaasi nzọụkwụ n'ọkwá mepụtara Abctools ka nke na-abụghị conductive faiba glaasi ma dịrị 9.5 n'arọ. Ọ nwere a mechiri emechi elu nke 1860mm na-emeghe elu nke 1730mm. Ugbo elu a na-arụ ọrụ dị mkpa n'ụlọ ọ bụla. Site na esere ụlọ ahụ gbanye ọkụ ọkụ ọkụ, ndị nwe ụlọ hụrụ ịdị mfe nke ubube a. E nwere tebụl ngwaọrụ na elu ya, nke nwere ike itinye ọtụtụ ngwaọrụ, ị nwere ike mezue ọrụ ahụ n'onwe ya na-enweghị mkpa ka ndị ọzọ nyefee ngwaọrụ gị n'aka gị.
AL102 Aluminium shelf n'elu ikpo okwu nzọụkwụ n'ọkwá aluminum ịkpakọba steepụ
PALH102 nke ABC meputara bu uzo aluminom nke nwere 300 lbs (kilogram 136). Ọ dị arọ 7.5kg, nke dị elu mechiri emechi nke 1340mm na oghere dị elu nke 1232mm.dị ụdị IA 2 nzọụkwụ aluminom n'elu ikpo okwu bụ nanị ubube na-ejikọ mma niile nke stool na steepụ steepụ. Ikpokoro buru ibu zuru oke maka agba, ngwaọrụ, ma ọ bụ ngwaike.
4 Nzọụkwụ otu akụkụ foldable aluminium nzọụkwụ n'ọkwá na njikwa na shelf maka ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí
AL204 nke Abctools mepụtara bụ ọkwa aluminom nwere ibu nke 225 pound. Ibu ya bụ 6kg, nke mepere emepe bụ 1438mm, nke mechiri emechi bụ 1565mm. Enwere ike ịkwado ya na tray nke dị mfe maka itinye ngwaọrụ ma ọ bụ ite agba, yana ọ gụnyere oghere maka itinye agba ma ọ bụ rollers.
Single-kwadoro ọkwa IA mpịachi Aluminium Platform Ubube stool
Ugbu a, m ga-agwa gị ọkwa ubube dị nchebe na nke a na-ebugharị, a na-echepụta ubube a ma mepụta ya n'onwe anyị, yana ihe megidere mgbochi pinching emeela patented. Ubube a nwere ọdịdị dị mma, ọ naghị eburu ohere mgbe apịaji ya ọ kwesịrị ekwesị maka oge ọ bụla.
Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Obere Nchekwa Obere Ime ụlọ ime ụlọ Shelf maka ulo Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Ogbe shelf